PMP V ကို / s ကို PRINCE2 Certificate များအကြားနှိုင်းယှဉ်
28 နိုဝင်ဘာ 2016
PMP V ကို / s ကို PRINCE2:အောင်မြင်မှုဆီသို့ဦးတည်ကနဦးပြောင်းရွှေ့ကြေးသို့သော်အောက်ပါချဲ့မနေတော့တဦးတည်းရဲ့ခေါ်ဆိုမှုကောက်ဖို့ဖြစ်နိုင်သည်အများဆုံးထွက်ရှိသောအဆိုပါအလုပ်အကိုင်အများအတွက်သင့်လျော်တပ်ဆင်ထားခံရဖို့လိုအပ်သောကျွမ်းကျင်မှုစွမ်းရည်ကို upgrade သောကွဲပြားခြားနားသောသင်ယူမှုတူရိယာများနှင့်အတည်ပြုချက်များအကြားကောက်ဖို့ဆက်ဆက်ဖြစ်ပါတယ်။
ထိန်းချုပ်ထားအခြေအနေများတွင်လုပ်ငန်းများတစ်ခုအတိုကောက်နှင့် PMP-မှန်မှန် Venture အုပ်ချုပ်ရေးကျွမ်းကျင်မှုဘို့ကျန်ရှိနေသော - Venture အုပ်ချုပ်ရေးမှာကျောင်းအပ်အထူးကုနှင့်အတူကြီးမားတဲ့ထောက်ခံမှုတန်ဖိုးထားသောအဓိကနှစ်ခုအသိအမှတ်ပြု PRINCE2 ဖြစ်ကြသည်။ တစ်ဖွံ့ဖြိုးလာခြင်းသစ်ကိုကျွမ်းကျင်သူအဖြစ်ဘယ်လိုရန်သူဆန့်ကျင်အမှန်တကယ်လိုအပ်သောသြဇာလွှမ်းမိုးမှုအားငါပေးမည်နှင့်အလွန်ပြင်းထန်တဲ့ Venture အုပ်ချုပ်ရေးဖျော်ဖြေမှုအတွက်မောင်းနှင်အားငါပေးမည်ဖြစ်သောအသိအမှတ်ပြုရွေးချယ်ဖို့ဘယ်သူ့ကိုမှလဲ?
PMP V ကို / s ကို PRINCE2: အနှုတ်ထိပ်တိုက်ရင်ဆိုင်မှုကဘာလဲ?
PMP အတည်ပြုချက်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ (PMP ဘယ်လိုပေါ်နေကြပါတယ်) ။
ဘယ်ကိစ္စမဆို, PMP တဦးတည်းကိုတွေ့ကြုံခံစားနိုင်ပါတယ်တဲ့ဓလေ့ထုံးတမ်းသင်တန်းမသာဖြစ်ပါသည်။ ဒါဟာသို့သော်ပိုပြီးပိုင်းတွင် USA တွင်စတင်ခဲ့ပြီးသောစွမ်းရည်အစီအစဉ်ထက်တစ်ဦးအသိအမှတ်ပြုသည်။ ဒါဟာအများဆုံးကောလဟာလသတင်းများအရအဖွဲ့အစည်းများအကျိုးတူအုပ်ချုပ်ရေး၏လယ်ပြင်တွင်မယ့်တစ်ဦးကိုရွေးချယ်ကျွမ်းကျင်မှုများကိုတွက်ချက်ရန်တိုင်းစရာချောင်းကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားသောစံဖြစ်ပြီး, ကွဲပြားခြားနားသောလုပ်ငန်းများကျော် crosswise strewn အတွေးအခေါ်, သင်ယူခြင်းနှင့်သေဒဏ်စီရင်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့်အနာဂတ် Venture ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်တက်အဆုံးသတ်ရန်လိုအပ်သည်ဝေဖန်စဉ်းစားတွေးခေါ်စွမ်းရည်ပါဝင်သည်။
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းသို့နင်းနေကြသူတစ်ဦးချင်းစီကသူတို့ကိုပိုကောင်းအကျိုးတူအုပ်ချုပ်ရေးလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနားမလည်ကူညီနိုင်လိမ့်မည်ဟုအသုံးအနှုန်းများ၏စကားလုံးရည်ညွှန်းကျစ်လစ်များနှင့်မြေတပြင်လုံးကြောင်းတွေ့လိမ့်မည်။ ဒါဟာသံသယမရှိဘဲသာလွန်လစာအစုအဝေးကိုအာမခံနှင့်စီးပွားရေးတိုးတက်မှုဒါရိုက်တာအဖြစ်မြောက်အမေရိကအတွက်သကျမှေးလုပျငနျးအောင်ထားချက်အရသူတို့သည်ရှေ့ကော်လံချုပ်ထိုင်ခုံပါဝင်မှအချို့ရှိပါသည်။ ဒါဟာ client များသည်ရှည်လျားတစီးကိုကျော် CV ကိုအမှန်တကယ်အကြီးအကတစ်ဦးမယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်ပထမဦးဆုံးအကျိုးတူအတူတက်ရောက်လာကူညီပေးနေ, ကြောက်မက်ဘွယ်စနစ်များကိုအုပ်ချုပ်ရေးအဖွင့်ပေးသည်။
ထို့နောက်တဖန် PRINCE2 - ဗြိတိန် (အဘယ်ကြောင့်ပေါ်နေကြပါတယ်) တွင်စိတ်ကူး - လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကြားတွင်အသုံးပြုသွားမည်စေခြင်းငှါစီစဉ်, ကို formats နှင့်အကြံအစည်၏တွေကမှားစရာအဆင့်နှင့်အတူ finish ကိုတစ်အကျိုးတူစီစဉ်ခြင်းနှင့် execute ဖို့ဘယ်လိုပတ်သတ်ပြီးအတွက်အထူးသဖြင့်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေရှိပါတယ်ရာသူ့ဟာသူတစ် Venture အုပ်ချုပ်ရေးစနစ်, ဖြစ်ပါတယ် ။ ဒါ့အပြင်အစိတ်အပိုင်းနှင့်တာဝန်ဝတ္တရားတိုင်းလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်ကြိုးစားရန်ဖြစ်ပါသည်။ ၎င်း၏ဒြပ်စင်အစီအစဉ်များနှင့်အဖွဲ့ကို Arrangement စုစည်းပြီး, အကျိုးတူအစီအစဉ်များ၏အလင်း၌ဆောင်ရွက်ချက်၏စီစဉ်စီစဉ်ထည့်သွင်း။
ယခုတွေ့ကြုံဒီဒဿနပညာ၏အဖြစ်ရှိသူတစ်ဦးချင်းစီကပုံမှန်နှစ်ဆစွမ်းရည်ကျေနပ်, အာရုံစိုက်နှစ်ဦးစလုံးအကျိုးတူနှင့်လုပ်ငန်းစဉ်ကိုသောစိတ်ဓါတ်များ၏ဖြစ်ကြသည်။ ဒါကြောင့်တစ်ဦးအလွန်စေ့စေ့စပ်စပ်ကတိသစ္စာပြုဖြစ်ပါတယ်ကတည်းကဒါဟာအခြေခံကျကျသူ့ကိုတစ်ခုချင်းစီတိုးတက်မှုမှာအကျိုးတူစီစဉ်များအတွက်လိုအပ်သောကျွမ်းကျင်မှုစွမ်းရည်ဖေါ်ပြခြင်း, အစဉ်အမြဲသင်ယူသူပြင်ဆင်, သူ့ကိုကိုလည်းကျင်းသူတစ်ဦးအကျိုးရှိအုပ်ချုပ်ရေးရရှိသည့်အခါသူကဆွဲမည်ဟုသောကျယ်ပြန့်လစာအဖြစ်တိုးတက်စေရန်ကူညီပေးသည် အနေအထား။ ယင်း၏ခိုင်မာတဲ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုချဉ်းကပ်မှုနှင့်အတူမည်သည့်နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံအနေဖြင့် client များတစ်ဦးချင်းစီစီးပွားရေးလုပ်ငန်း setting ကိုအတွက်သိသာထင်ရှားသောအလွန်ကြီးစွာသောဒီဂရီဖို့ technique ကိုအောင်, သူတို့ရဲ့အထူးသဖြင့်လှုပ်ရှားမှုများအတွက်အစီအစဉ်များနားမလည်ခြင်းနှင့် execute နိုင်ပါတယ်။
ကျွမ်းကျင်သူတစ်ဦးကသူသည်ကိုယ်တိုင်နှင့်သူအတွက်လုပ်ကိုင်ဖို့လိုအပ်ကြောင်း, သူသည်ဘူမိဗေဒစီစဉ်ပေးသည်အဘယ်မှာရှိသူနှစ်ဦးအကြားဆုံးဖြတ်နိုင်သည့်စက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်ကြည့်ရှုဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဘယ်မှာနားလည်မှု, စုပြုံရန်လိုအပ်ပါသည်ဘယ်လိုကဆက်ပြောပါတယ်။
3 သင်တန်းများ Project မှစီမံခန့်ခွဲမှု Professional ကသင်တန်းစွဲခံရဖို့